nepal bangladesh bank limited(nepal bangladesh bank limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
मर्जर प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चको आदेशपछि नेपाल बंगलादेश बैंकको सेयर कारोबार खुल्ने !
काठमाण्डौ । नबिल बैंकमा विलय हुने प्रक्रियामा रहेको नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकका लगानीकर्ताले आउँदो मंगलबारदेखि सेयर कारोबार गर्न पाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले बिहीबार एनबी बैंकलाई नबिल बैंकसँगको मर्जर प्रक्रिया हाललाई अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै अब एनबी बैंकका लगानीकर्ताले सेयर कारोबार...
नेपाल बंगलादेश बैंकद्वारा रु. १ लाखको दुर्घटना बीमा भुक्तानी
काठमाण्डौ। नेपाल बंगलादेश बैंकले बचत खाता खोल्ने ग्राहकको सुरक्षणके लागि गरिएको दुर्घटना बीमा बापतको दाबी रकम रु. १ लाख ग्राहक स्व. महमुदा खातुनकी छोरी मसउदा खातुनलाई प्रदान गरेको छ। स्व. खातुनले नेपाल बंगलादेश बैंकको ब्रह्मपुरी शाखामा खाता खोली कारोबार गर्दै आएकी थिइन्। उनको गत कात्तिक ६ गते सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको...
नबिल–एनबी मर्जरलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने तयारीमा राष्ट्र बैंक, बोर्ड बैठकमा छलफल
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नबिल बैंकलाई नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी) प्राप्ति गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने विषयमा छलफल बढाएको छ। नबिललाई एनबी प्राप्ति गर्ने स्वीकृति दिने विषयमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफल भइरहेको हो। ‘सञ्चालक समितिले सैद्धान्तिक सहमति दिन २–३ पटक बैठकमा छलफल गरिसकेको छ’, स्रोतले...
काठमाण्डौ। नेपाल बंगलादेश बैंकको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी भुपेन्द्र पाण्डे पाएका छन्। बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेलाई कामु सीईओको जिम्मेवार िदिएको हो। बैंकिङ क्षेत्रमा २० बर्षको लामो अनुभव भएका पाण्डे यसअघि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक तथा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर...
नवील–एनबी मर्जर ५ महिनामा सकिने, मुख्य सूचकमा हुनेछ यस्तो प्रगति
काठमाण्डौ । नवील बैंकले नेपाल बंगलादेश(एनबी) बैंकलाई प्राप्ति गर्ने प्रक्रियालाई ५ महिनाभित्रमा टुंग्याइने बताएको छ । बैंकले एनबी बैंकसँग प्राप्तिको सम्झौता भएपछि जारी विज्ञप्तिमा दुवै पक्षबीच यो प्रक्रियालाई ५ महिनाभित्र टुंग्याउने सहमति बनेको जानकारी दिएको हो । 'बैंकहरुले प्राप्ति कार्य पाँच महिना भित्र सम्पन्न गर्ने...
काठमाण्डौ । नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकलाई गाभ्नका लागि प्रारम्भिक सम्झौता गरेको छ। आज साँझ नबिल र नेपाल बंगलादेश बैंकबीच मर्जरसम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता भएको हो। सम्झौतापत्रमा नबिल बैंकका तर्फबाट मर्जर समितिका संयोजक उदयकृष्ण उपाध्याय र नेपाल बंगलादेश बैंकका तर्फबाट इन्द्रबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छ�...
दुई ठूला घरानाको जुँगाको लडाईंले नवील–एनबी मर्जर धरापमा, घट्न थाल्यो मूल्य
काठमाण्डौ । नवील बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया धरापमा परेसँगै त्यसको प्रभाव दोश्रो बजार मूल्यमा समेत देखिएको छ । नेपाल बंगलादेश बैंकको ठूलो परिमाणको सेयर खरीद गरेर नवील बैंकसँग मर्जर गराउन नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीले गरेको प्रयासमा जिल्ला अदालतले ब्रेक लगाइदिएपछि ‘संभावित मर्जर’ नहुने...
भोजपुरमा नेपाल बंगलादेश बैंकद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘वित्तीय साक्षरता नीति’ लाई अवलम्बन गर्दै नेपाल बंगलादेश बैंकको भोजपुर शाखाले स्थानीय भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। कार्यक्रममा क्याम्पसका १७० जना विद्यार्थीलाई वित्तीय सेवा सम्बन्धमा जानकारी गराइएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको...
नेपाल बंगलादेश बैंकमा अब अनलाइनबाटै मुद्दति खाता खोल्न सकिने
काठमाण्डौ। नेपाल बंगलादेश बैंकले आफ्ना ग्राहकको सुविधालाई ध्यानमा राखेर अनलाइनबाटै मुद्दति खाता खोल्न सकिने सुविधा ल्याएको छ। यसअन्तर्गत ग्राहकले बैंकको वेबसाइट www.nbbl.com.np मा अनलाइन Fixed Deposit मा क्लिक गरेर आफूले चाहेको रकम तथा समयअनुसार मुद्दति खाता खोल्न सक्नेछन्। बैंकले यो योजना विशेषगरी नेपाली नागरिक तथा आप्रवासी नेपालीहरुका...
नेपाल बंगलादेश बैंकका अध्यक्ष शकिबद्वारा सपथ ग्रहण
काठमाण्डौ । नेपाल बंगलादेश बैंकको अध्यक्षमा पुनः चयन भएका एआरएम नजमुस शकिबले आज पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेका छन्। अध्यक्ष शकिबले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेका हुन्। सपथ ग्रहण कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल बंलादेश बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति...
नेपाल बंगलादेश बैंकको सञ्चालकमा ६ जना निर्वाचित
काठमाण्डौ । नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडको सञ्चालकमा ६ जना निर्वाचित भएका छन्। बैंकको बिहीबार सम्पन्न २७ औँ वार्षिक साधारणसभाबाट सञ्चालक समितिमा ६ जना निर्वाचित भएका छन्। जसमा ३ जना संस्थापक समूहबाट र ३ जना सर्वसाधारण समूहबाट निर्वाचित भएका छन्। संस्थापक समूहबाट निर्वाचित हुनेमा एआरएम नजमुस शकिब, एम शाह आलम सरवर र क्यारुन नहर अहमद...
नेपाल बंगलादेश बैंकद्वारा शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताललाई रेम्डिसिभिर औषधि सहयोग
काठमाण्डौ। नेपालमा बढ्दो कोभिड १९ को संक्रमण र यसबाट हुनसक्ने मृत्युबाट नेपाली जनतालाई जोगाउने प्रयासमा हातेमालो गर्दै नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदयित्वअन्तर्गत ९० भायल रेम्डिसिभिर औषधि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुलाई सहयोगस्वरूप प्रदान गरेको छ। उक्त औषधि नेपाल बंगलादेश बैंकका...
नेपाल बंगलादेश बैंकको वार्षिक साधारणसभा मंसिर २ मा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडले आफ्नो २७ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो मंसिर २ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको कमलादीस्थित बैंकको रजिस्टर्ड कार्यालयमा बिहान ११ बजेबाट अनलाइन माध्यमबाट हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कुल...